Maalinta Ciidamada Xooga dalka oo laga xusay magaalada Muqdisho | goboladaradio.com	Friday, February 24th, 2017	Home
Maalinta Ciidamada Xooga dalka oo laga xusay magaalada Muqdisho
Published on April 12, 2013 by liibaan · No Comments Sanadguuradii 53 aad ee kasoo wareegatay aaska ciidamada xooga dalka Soomaaliya ayaa maanta waxaa laga xusay magaalada Muqdisho iyo qaar ka mida Gobolada dalka Soomaaliya gaar ahaan goobaha ay dowladu gacanta ku heyso.
Munaasabad balaaran ayaa maarna ka dhacday Xarunta Wasaaradda gaashaandhiga Soomaaliya taasi oo uu ka qeyb galay Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
Saraakiisha ciidamada Milatariga Soomaaliya oo ka hadlay munaasabada ayaa sheegay in ciidamada ay duruufo adag ku shaqeeyaan loona baahan yahay in la siiyo mumnaata koowaad si ay dib ugu soo kabsadaan.
Amaanka Xarunta iyo wadooyinka magaalada Muqdisho ayaa si aad ah loo adkeeyay iyadoo meelaha qaar la hakiyay gaadiidka iyo dadka.
Ciidamo isugu jira AMISOM Iyo dowldda Soomaaliya ayaa lagu daadiyay Isgoysyada iyo wadooyinka ugu muhiimsan Caasimada si aan la isugu dayin in qaraxyo laga fuliyo Xarunta ay ka dhaceyso Munaasabada.